Firaisam-pirenena - Merinaforever - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Firaisam-pirenena - Merinaforever
Miala tsiny re ry zoky,miala fondro ry zandry,
F'efa ho 50 taona 'zao isika no niandry,
Mba ho tafala amin'ity fahantrana,
Kanefa mosary ny hita eran'ny tanàna
Na hihodinkavia ianareo na hihodinkavanana,
Tsy ahita fanazavana iray mba azo tanana,
Afa-tsy ny famikirantsika amin'ny firaisana..
No mahatonga antsika hitondra faisana.
Ahintsiho ny hevi-diso,aoka ny fitaka hihato,
Fa tsy izay te hitambatra akory dia ho vato:
Izy ireny no mitambatra anie ka voajanahary,
Izany no fahamarinana hita miharihary.
Ekeko kosa nefa,sady fantatro no haiko,
Fa misy koa ny hoe "béton" amin'ny teny baiko.
Toa mafy toa vato,nefa amin'ny teny tsy an'avona:
Dia azo lazaina fa voakazon-didy jadona.
Tohananao mafy ny maha iray ny Repoblika?
Aminao mazàna,'zay mitsipaka an'io "alika"
Satria izany hoy ianao no sitrak'Imboasalama,
Sy ireo nanaraka azy,indrindra Ilehidama!
Moa va ny tsy nitandrovan'Ilehidama hasasarana...
Dia ny firaisam-pirenena holovan'i Tsiranana?
Hadinonao koa angaha fa Andriamatoa Galliéni
Dia nanao izay ho afany mba ho iray ny "colonie"?
Raha ny marina nefa no atao indray mibango,
Ny harem-pirenena,ny vazaha no mitango ,
Dia foana tsy nisy na ny sotro na lovia,
Satria ireo no manjaka amin'ity tany ity.
Indrisy r'Imboasalama,taloha ianao nandihy
Ankehitriny kosa ny Merina,zary "confetis"
Tonga amin'ny fiteny hoe:"ny anao no be indrindra"
Ianao izay nanantena ny "lova tsy afindra"
Ny anao azo lazaina fa teti-kady nandamoka,
Tsy hay hotohizana fandrao ho vonomoka,
No hiafaranay Merina,sisa nanamborana,
Sisan-dapabe,...sisa tsy nodorana.
Miarantsoa (30/03/2005 10:45:21)
NyKanto (30/03/2005 11:00:05)
Merinaforever (30/03/2005 12:11:06)
rabona (01/04/2005 19:20:11)
rabona (01/04/2005 19:54:21)
Miarantsoa (02/04/2005 15:47:33)
Miarantsoa (02/04/2005 15:59:10)
NyKanto (03/04/2005 16:09:10)
Merinaforever (04/04/2005 02:26:46)
Merinaforever (04/04/2005 02:29:38)
Merinaforever (04/04/2005 02:31:52)
Daty : 27/03/2005
Mpamangy : 1322